Hunter: Ahoana ny fomba hahitana adiresy mailaka mifandray amin'ny B2B ao anatin'ny segondra | Martech Zone
Hunter: Ahoana ny fomba hahitana adiresy mailaka mifandray B2B ao anatin'ny segondra
Alarobia, Aprily 27, 2022 Alarobia, Aprily 27, 2022 Douglas Karr
Misy fotoana tena mila maka adiresy mailaka fotsiny ianao mba hifandraisana amin'ny mpiara-miasa iray izay tsy anananao ao amin'ny bokinao. Gaga foana aho, ohatra, hoe firy ny olona manana kaonty LinkedIn misoratra anarana amin'ny a manokana adiresy mailaka. Mifandray izahay, ka mijery azy ireo aho, mametraka mailaka ho azy ireo… ary tsy mahazo valiny avy eo. Handeha amin'ny fifandraisana mivantana rehetra amin'ny tranonkala media sosialy aho ary ny valiny dia farany… "Oh, tsy manamarina izany adiresy mailaka izany mihitsy aho." Doh!
Hunter: Mitadiava adiresy mailaka matihanina
Vahaolana iray mahafinaritra sy tsotra dia Hunter. Isan'andro dia mitsidika pejin-tranonkala an-tapitrisany i Hunter mba hahitana angon-drakitra momba ny raharaham-barotra azo atao. Tahaka ny motera fikarohana, mitazona tondron'ny tranonkala iray manontolo izy ireo ary mandamina angona izay tsy ao anaty tahiry hafa.
Hunter mamela anao hahita adiresy mailaka matihanina ao anatin'ny segondra ary mifandray amin'ireo olona manan-danja amin'ny orinasanao. Raha hampiasa an'i Hunter ianao dia ampidiro fotsiny ny sehatra misy anao ary tsindrio Mitadiava adiresy mailaka.
Ny valiny dia manome lamina mahazatra ho an'ny adiresy mailaka ary koa ny isan'ny loharano nipoiran'ny adiresy mailaka. Azonao atao mihitsy aza ny manindry ny loharano ary mijery ny toerana sy ny fotoana nahitana ny angona:
Hunter mamela anao koa:
Karohy amin'ny anarany – karohy amin'ny anarana voalohany, anarana farany, na amin'ny sehatra hahitana raha misy ny adiresy mailaka an'ny olona iray voatanisa.
Hamarino adiresy mailaka – ampidiro mailaka ary hamarino raha mino izy ireo fa mitombina izany na tsia.
Mitadiava mpanoratra – tadiavo ny adiresin'ny mpanoratra avy amin'ny lahatsoratra an-tserasera.
Ny fifandraisana tsirairay izay fantatrao Hunter azo ampiana a lisitra fitarihana ary azonao ampiasaina fanentanana mailaka mangatsiaka amin'ny fampidirana ny kaonty mailaka Google Office na Microsoft anao. Endri-javatra lehibe izany satria tena mandefa ny mailaka avy amin'ny sehatra mailakao. Azonao atao mihitsy aza ny manamboatra modely manokana ao anatiny.
Raha misoratra anarana amin'ny Hunter, maimaim-poana ny sehatra misy fikarohana hatramin'ny 25 isam-bolana.
Mitadiava adiresy mailaka matihanina
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Hunter ary mampiasa rohy mifandray amin'izy ireo aho ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: b2bb2b adiresy mailakamanangana lisitra mailaka mangatsiakamanangana lisitry ny mailakamanangana lisitra fitarihanamailaka mangatsiakamailaka fanentanana mangatsiakafitadiavana mailaka domainadiresy mailakasehatra adiresy mailakalisitry ny mailakafanentanana mailakamailaka prospectstadiavo ny adiresy mailaka mpanoratramitadiava adiresy mailakampihazafanentananaadiresy mailaka matihaninakarohy sehatra ho an'ny adiresy mailakamanamarina ny adiresy mailaka
Postaga: Sehatry ny fampielezan-kevitra marani-tsaina ampiasain'ny AI